လိပ်ဆန် Krispie ရယူထားသော - ချက်ပြုတ်နည်းများ
stuffing နှင့်ရောသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူကြက်သား casserole
သငျသညျ crockpot အတွက် goulash စေနိုင်သည်
အမဲသား Chuck လက်ဝါးကပ်တိုင်နံရိုးကင် crock အိုး
လိပ်ဆန် Krispie ရယူထားသော
ငါ Rice Krispie ရယူထားသောကိုချစ် ... သူတို့အနည်းငယ်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလုပ်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြပေမယ့်သူတို့ကအမြဲငါ့စာအုပ်တွေထဲမှာအပေါင်းသောမီးဖိုကိုဖွင့်မလိုအပ်ပါဘူး!
ဤလိပ်လိပ် Krispie ရယူထားသောအရသာသည်အလွန်အရသာထူးခြားပြီးအရသာရှိသော gooey caramel topping၊ pecans နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ချောကလက်ထူသော ganache နှင့်အတူသွေ့ခြောက်စေသော။ ချောကလက်နှင့် caramel အတူတကွဒါဟာဖြစ်စေမယ့် ... အတူတကွလက်ျာဘက်တစ်ခုခုပဲရှိတယ် Caramel ချောကလက် Poke ကိတ်မုန့် ဒါမှမဟုတ် အိမ်လုပ် Caramel ခွက်များ ယခုပျော့ chewy ဆန် Krispie ရင်ပြင်၏ထိပ်ပေါ်မှာ! ငါကြီးမားတဲ့သကြားလုံးလူတစ် ဦး မဟုတ်ပါဘူး ... ငါများသောအားဖြင့် savory ကောက်ပေမယ့် ဒီအားရစရာ ကျိန်းသေငါ့ကိုသကြားလုံးကောက်ပါစေ။
၂၁ ရက်ပြင်ဆင်မှုများချက်ပြုတ်ခြင်းအစီအစဉ် ၁၂၀၀
အရသာရှိသော၊ နူးညံ့။ အဝါးစားနိုင်သောရင်ပြင်များအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်မှာရိုးရာသေတ္တာစာရွက်တွင်ခေါ်ဆိုထားသည့်အတိုင်းပိုမိုမြန်ဆန်စွာပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၉-၁၃ ဒယ်အိုးကိုတောင်းဆိုဖို့ Rice Krispie ရင်ပြင်ကိုလုပ်တဲ့အခါ၊ သူတို့ကဒယ်အိုးတစ်လုံးကိုသုံးတာထက် ၃″ လောက်ပိုတိုတယ် (ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့သတ္တုဟာ ၉″ x10 to နဲ့ပိုနီးတယ်) ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကပိုထူထပ်တဲ့စတုရန်းကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ Rice Krispie ရင်ပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြီးသောအရာမှာသင်မုန့်ဖုတ်ချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ သင်၏ဒယ်အိုးအားဖယ်ရှားရန်နှင့်ဖြတ်ရန်လွယ်ကူစေရန်သားရေစာစက္ကူသို့မဟုတ်အမဲဆီသတ္တုပါးဖြင့်တန်းစီလိုသည်။
ဤ Turtle Rice Krispie ရယူထားသောရနံ့သည်လျှင်မြန်။ လွယ်ကူသည် Caramel-bit သင်တို့မူကား (သင် 5.5 အောင်စလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်) သို့မဟုတ်ပင်တစ် ဦး ကိုပုံမှန်ထည်မဟုတ် caramels ကိုသုံးနိုင်သည် လွယ်ကူသောအိမ်လုပ် Caramel ။ Cream လေးကိုချောကလက်နဲ့ပေါင်းစပ်တာကဘယ်လိုလဲ ရိုးရာချောကလက် ganache ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီတစ်ခုသည်အနည်းငယ်ပိုထူသည်။ topan အဖြစ် ganache ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြီးသောအရာကချောကလက်ကိုသင်ဖြောင့်ဖြောင့်သုံးလျှင်လိုမျိုးမကျိုးမနင်းဖြစ်သည်။
သင်လိပ်ဆန် Krispie ရယူထားသောစေရန်လိုအပ်သည်ပစ္စည်းများ
*9× 13 ပေါင်မုန့် * caramel-bits * spatula *
ပြင်ဆင်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်0 မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၆ ရင်ပြင်များ စာရေးသူHolly Nilssonလိပ်ဆန် Krispie ရယူထားသောနေရာများသည် caramel, pecans နှင့်ချောကလက်များနှင့်လွယ်ကူစွာတင်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောဆွေးနွေးနိုင်သောဆန်စပါး Krispie ကိုအစဉ်အမြဲပြုမူသောအစွန်အဖျားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၇ ခွက် အသေးစား Marshmallows ခွာ
▢၇ ခွက် ဆန် Krispies သီးနှံ
▢1 ⅓ ခွက် ကြက်ဥ ခွာ
▢၁ ခွက် တစ်ဝက်ချိုမြိန်ချောကလက်ချစ်ပ်
▢¼ ခွက် ခရင်မ်လေး
▢5 ½ အောင်စ caramel-bits သို့မဟုတ်5½အောင်စ caramels unwrapped
▢2 ½ ဇွန်း ခရင်မ်လေး
ထောပတ်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်တွင်အသေးစား marshmallows ၆ ခွက်အရည်ပျော်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ဆန် Krispies, ⅓ခွက်ဖလားကိုပိုင်ရှင်များနှင့် marshmallows 1 ခွက် (unmelted) တွင်နှိုးဆော်။ ကောင်းမွန်သောအမဲဆီ9× 13 ဒယ်အိုးထဲသို့နှိပ်လိုက်ပါ (သို့မဟုတ်ပိုထူသောဆန်စပါး Krispie ဖြစ်ပါကအနည်းငယ်သေးငယ်သည်) ။
caramel-bits နှင့်ဇွန်း ၂ ½ဇွန်းလေးသောမုန့်များကိုမိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) တွင် ၆၀-၉၀ စက္ကန့် (စက္ကန့် ၃၀ တိုင်းအရှိန်လျှော့) အထိချောမွေ့သည်အထိအရည်ပျော်ပါ။
သီးခြားပန်းကန်လုံးတွင်¼ခွက်လေးလံသောမုန့်နှင့်ချောကလက်ချစ်ပ်များကိုပေါင်းစပ်ပါ။ မိုက်ခရိုဝေ့အား ၅၀% အားဖြင့်စက္ကန့် ၉၀ အထိ (စက္ကန့် ၃၀ တိုင်းတွင်လှုံ့ဆော်သည်) ချောမွေ့သည်အထိ။
Krispies ကျော်က caramel နှင့် the ချောကလက်။ pecans နှင့်အတူထိပ်တန်း။ ကျန်ရှိနေသေးသော caramel နှင့်ချောကလက်တို့ကိုဖြုန်းပါ။ လုံးဝအေး
သော့ချက်စာလုံးလိပ်ဆန် krispie ရယူထားသော သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
Caramel ချောကလက် Poke ကိတ်မုန့်
လွယ်ကူသော Caramel ဆော့စ်
အိမ်လုပ် Caramel ခွက်များ